AmaNgqina KaYehova—Ingxelo Yezomthetho
ERashiya: Ukushumayela iindaba ezilungileyo eMoscow
Akuyomfuneko ngamaNgqina kaYehova ukuba abhaliswe ngokusemthethweni ukuze anqule. Nakuba kunjalo, kufuneka sibhaliswe ukuze sikwazi ukuthenga nokurenta izakhiwo zokunqulela nokuze sithumele iincwadi zethu kwezinye iindawo.
Ngo-2004, iinkundla zaseRashiya zawuvala umbutho osemthethweni wamaNgqina kaYehova aseMoscow. Oko kwenza ukuba abazalwana bethu baseMoscow baphathwe ngenkohlakalo. Babechukelwa ngamapolisa, behlaselwa ngabantu ngoxa beshumayela esidlangalaleni, abanini beendawo abahlanganiselana kuzo bebagxotha, bebashiya bengenazindawo zokunqulela. Ngo-2010 iNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu yakhupha isigwebo isithi, iRashiya inyhashe amalungelo amaNgqina kaYehova aseMoscow nomyalelo wokuba uphinde uvulwe umbutho wawo osemthethweni. Siyavuya ukwazisa ukuba ngoMeyi 27, 2015, iofisi eseMoscow yeSebe Lezobulungisa laseRashiya yabhalisa iNtlangano YamaNgqina KaYehova Asekuhlaleni aseMoscow.
Imibutho esemthethweni yamaNgqina kaYehova ehlabathi lonke, idla ngokungahlawuliswa rhafu, njengoko kunjalo nangezinye iicawa ezininzi nemibutho ecela amalizo. Ngezinye izihlandlo oorhulumente baye bale ukungawahlawulisi irhafu amaNgqina.
ESweden, abasemagunyeni bathi iBheteli lishishini, iqesha abantu ibe asindawo nje ekuhlala kuyo abantu abakwinkonzo yexesha elizeleyo. Urhulumente uye wathi iBheteli ngumqeshi nabo bahlala kuyo ngabaqeshwa ibe batyala inkuntyula yemali kwirhafu. Ukuze azame ukucombulula le ngxaki, amaNgqina aseSweden aye ayisa kwiinkundla zasekuhlaleni nakwiNkundla YaseYurophu Yamalungelo Abantu.
Ukungathathi Cala Nokungavunyelwa Sisazela Ukuya Emkhosini
Abantu bakaYehova bawuthatha nzulu umyalelo oseBhayibhileni othi, ‘bawakhande amakrele abo abe ngamakhuba’ baze ‘bangaphindi bafunde nemfazwe kwakhona.’ (Isa. 2:4) Bahlala bengathathi cala nangona abanye oorhulumente bengenayo imisebenzi enokwenziwa ngabo bangafuniyo ukuya emkhosini.
Umthetho okhoyo ngoku waseMzantsi Korea awulisel’ iliso ilungelo lokungavumi ukuya emkhosini ngenxa yokungavunyelwa sisazela. Kule minyaka engaphezu kwe-60 edlulileyo, kuye kwavalelwa abafana bamaNgqina abangaphezu kwe-18 000 ngenxa yokungavumi ukuya emkhosini. Phantse onke amaNgqina kwelo lizwe anomhlobo okanye isalamane esikhe savalelwa. Ngo-2004 nango-2011, iNkundla Yomgaqo-siseko yakuMzantsi Korea yema ngelithi kusemthethweni ukuvalelwa kwawo. Nakuba kunjalo, ngoJulayi 2015, le Nkundla yaphinda yawuhlola lo mba. AmaNgqina kaYehova ehlabathini lonke athandazela ukuba ude ucombululeke lo mba ukuze abazalwana bethu abaselula bakuMzantsi Korea bangaphinde bavalelwe ngenxa yokholo lwabo.
AmaNgqina kaYehova amathathu aseEritrea bavalelwe kangangeminyaka eyi-22 ngenxa yokungavunyelwa zizazela zabo ukuba baye emkhosini. UPaulos Eyassu, noNegede Teklemariam kunye noIsaac Mogos zange babekwe tyala okanye banikwe ithuba lokuzithethelela enkundleni. Bekunye nabanye abazalwana noodade abangaphezu kwe-50 baqhubeka beyigcinile ingqibelelo yabo nangona bephathwe kakubi neemeko zasentolongweni zingaginyisi mathe. Siqinisekile ukuba uYehova uyakuva ukuncwina kwabo babanjelwe ukholo lwabo kwaye uya kuba phendulela.—INdu. 79:11.
EUkraine, uVitaliy Shalaiko kwathiwa naye makaye emkhosini ngoAgasti 2014 xa kwakuqokelelwa abantu bokuya apho. Wala ukuya emkhosini kodwa wathi ukhetha ukwenza omnye umsebenzi ongenanto yakwenza nomkhosi. Umtshutshisi wambeka ityala lokungawuxhasi umkhosi uMzalwan uShalaiko, kodwa inkundla kamantyi neyezibheno yamfumanisa engenatyala. Inkundla yezibheno yathi ukuxhalabela ukhuseleko lweLizwe akusosizathu sokunyhasha amalungelo abantu, kwaye “ilungelo lokungayi emkhosini ngenxa yesazela alinakubekelwa imida.” Umtshutshisi waphinda wabhena. NgoJuni 23, 2015, enye yeenkundla eziphakamileyo eUkraine yabambelela kwisigqibo esasenziwe ziinkundla zokuqala. Yathi ilungelo lokungayi emkhosini ngenxa yesazela nelokukhetha ukwenza eminye imisebenzi liyasebenza naxa kukho iimeko zongxamiseko elizweni.
EUkraine: UVitaliy Shalaiko uvuyela ukushumayela entsimini
Xa ethetha ngesigwebo setyala lakhe, uMzalwana uShalaiko uthi: “Andomeleza amazwi akuYeremiya 1:19. Ndandilindele nantoni na—eyona nto yayibalulekile kukunyaniseka kuYehova. Ndiqinisekile ukuba soze andishiye kodwa uya kundinika amandla okuhlala ndinyanisekile kuye. Kodwa ke andizange ndiyiphuphe nokuyiphupha le yokuba eli tyala liza kugwetywa ngale ndlela. Ndafunyaniswa ndingenatyala kuzo zontathu iinkundla zamatyala. Kuwo onke la matyala ndazibonela ngawam ukuba abazalwana bayandixhasa. Abazange bandilahle.”
Ukungathathi Cala Namatheko Elizwe
Amatheko elizwe yenye ingxaki aba nayo amaKristu ngenxa yokungathathi cala kwawo. Ngokukodwa abantu abaselula, basenokunyanzelwa ngootitshala ukuba bangathembeki kuYehova ngokuba bacule umhobe wesizwe okanye bakhahlele iflegi.
KwiSithili saseKarongi eRwanda, abaphathi besikolo batyhola abantwana abaninzi bamaNgqina ngelithi abawuhloneli umhobe wesizwe kuba abafuni ukuwucula. Abo bafundi bagxothwa esikolweni bade bavalelwa entolongweni. NgoNovemba 28, 2014, iNkundla Yezibheno yaseKarongi yabafumanisa bengenatyala, yatsho isithi ukungafuni kwabo ukucula umhobe wesizwe akubonisi ukuba abawuhloniphi. Nakwamanye amazwe aseAfrika, njengaseCameroon, eDemocratic Republic of Congo, e-Equatorial Guinea naseMalawi, abantwana bamaNgqina baba nengxaki efanayo. Kwezinye iimeko nabo babede bagxothwe ezikolweni. Abazalwana bethu abakula mazwe benza konke okusemandleni abo ukucacisela amagunya karhulumente nabaphathi besikolo ngokungathathi cala kwamaNgqina kaYehova.
EHonduras: Ekugqibeleni uMirna Paz noBessy Serrano banikwa izatifiketi zabo
NgoDisemba 2013, kwisikolo sikarhulumente eLepaera, eHonduras, abantwana ababini bamaNgqina zange bazinikwe izatifiketi zabo ngenxa yokuba bengavumi ukucula umhobe wesizwe nokunqula iflegi. Efuna ukulungisa le ngxaki, amagqwetha amabini angamaNgqina kaYehova adibana nommeli weSebe Lemfundo aza amxelela ngamanye amatyala axoxwe kwamanye amazwe, apho umthetho uye waxhasa abantwana bamaNgqina. Lo mmeli waba nobubele waza wathi uza kubavumela abafundi nabazali babo ukuba babhale izizathu zabo bazithumele kwigqwetha eliphethe iOfisi kaNobhala Wemfundo eHonduras. Emva kokuba lizihlolile, ngoJulayi 29, 2014 lakhupha umyalelo wokuba imfundo “ifanele ifunyanwe ngabo bonke abantu, ngaphandle kwalo naluphi na ucalucalulo” laza lathi abantwana bamaNgqina mabanikwe izatifiketi zabo.
Urhulumente Usidlel’ Indlala
Kuzo zonke iintlanga, thina maNgqina kaYehova sithobela umyalelo kaYesu wokuxelela abamelwane bethu ngeendaba ezilungileyo zoBukumkani, wokuhlanganisana kunye ukuze sinqule nowokufunda iLizwi likaThixo rhoqo. Asiwuthathi lula umyalelo weBhayibhile wokuba sibethelele imiyalelo kaYehova kwiintliziyo zabantwana bethu ‘nowokuzikhwebula egazini.’ (IZe. 15:20; Dut. 6:5-7) Ngamanye amaxesha ukuthobela kwethu le miyalelo kusibangela ukuba sibhidane nabasemagunyeni, ekusenokwenzeka ukuba abakuqondi ukuma kwethu.
EFlorida, eMerika, enye ijaji yanika umama ongeloNgqina ilungelo lokufundisa abantwana bakhe abathathu ngonqulo. Yena utata oliNgqina kwathiwa makangabafundisi nangantoni na engqubanayo nenkolo yamaKatolika. Utata wabhena, ibe ngoAgasti 18, 2014, inkundla yezibheno yasirhoxisa eso sigqibo sejaji. Ibhekisela kwamanye amatyala aye axoxwa, le nkundla yabhala yenjenje: “Imiqathango ebekelwa ilungelo lomzali ongahlali nabantwana lokubafundisa ngeenkolelo zakhe ayamkelwa xa kungekho bungqina bucacileyo nobuvakalayo obubonisa ukuba izinto ezenziwa nezifundiswa lolo nqulo ziyingozi.”
Esi sigqibo sanika abantwana ilungelo lokufumana imiyalelo nolwalathiso lukaYehova uThixo oluluncedo bengathintelwa nto. Ngoku bonke benza inkqubela ngokomoya njengoko beqhubeka besiya ezintlanganisweni. Utata wabo uthi: “Ukunyamezela le meko ngokuqinisekileyo kundenza ndibe ngumntu obhetele. Mva nje luye lwavavanywa ngokwenene ukholo lwam, kodwa uYehova uye wandinceda andagungqa! Ndiyaqonda ukuba xa sikhetha ukukhonza uYehova siyazi ukuba siza kutshutshiswa.”
ENamibia: UEfigenia Semente nabantwana bakhe abathathu
Ingqibelelo kaDade Efigenia Semente, umama wabantwana abathathu eNamibia, yavavanywa ngokwenene. Ngoxa wayezala umntwana wakhe wesithathu esibhedlele, kwabakho ingxaki ibe ngenxa yayo, abanye oogqirha noonesi kunye nezalamane zakhe ezingengomaNgqina zafumana umyalelo wenkundla wokuba anyanzelwe ukuba atofele igazi. UDade Semente wakumela ngesibindi ukungatofelwa gazi waza wasebenzisa umthetho ukuze akhusele ilungelo lakhe lokukhetha indlela afuna ukunyangwa ngayo. NgoJuni 24, 2015, iNkundla Ephakamileyo yaseNamibia yaxhasa lo dade isithi, “ilungelo lokukhetha into umntu afuna yenziwe okanye ingenziwa kumzimba wakhe, enoba ngumzali okanye akanguye, alinakuphikiswa.” UDade Semente wathi: “Sayibona inkxaso kaYehova ngendlela esingazange siyibone ngaphambili. Kumnandi ngokwenene ukuba yinxalenye yobu buzalwana. UYehova usikhathalele ngokwenene.”
AmaNgqina aseSwitzerland ayakuvuyela ukushumayela kwizitrato zezixeko ezikhulu. Noko ke, isixeko saseGeneva sakhupha umyalelo owalela ukusetyenziswa “kweetafile eziyisasaza ngokungqalileyo nangokungangqalanga inkcazelo yonqulo ebantwini.” AmaNgqina amangala enkundleni esithi, ukuyekiswa kwawo ukusasaza inkcazelo yonqulo esebenzisa iitafile “kubangela ukuba angayifumani inkululeko yonqulo futhi angakwazi ukukhupha izimvo zawo.” Inkundla yavumelana nawo, ibe asebenzisana kakuhle nabasemagunyeni ukuze bamisele indawo nexesha anokuzibeka ngalo iitafile zawo.
Abaseburhulumenteni eAzerbaijan baye bangathi bayaqinisa ekufuneni ukuphelisa umsebenzi wamaNgqina kaYehova. ISebe Lezokhuseleko Lwelizwe lisoloko libiza amaNgqina ukuze liwapheke liwophula ngemibuzo. Lisoloko ligqogqa noncwadi olungavumelekanga ukuba lungene kweli Lizwe kwimizi yamaNgqina. Ihlabathi lothuka ngoFebruwari 2015, xa ummeli weli Sebe waphosa amaNgqina amabini entolongweni, uIrina Zakharchenko noValida Jabrayilova, ngenxa yokuba babencokola nabamelwane babo ngeBhayibhile. Nangona sibuhlungu ngeso senzo, sivuyiswa kukuba abavakalisi baseAzerbaijan bayigcinile inzondelelo yabo ibe bashumayela “iindaba ezilungileyo zobukumkani” ngesibindi kubamelwane babo.—Mat. 24:14.
AmaNgqina kaYehova aseRashiya ajamelene nokungenelela kukarhulumente ngokungenalusini kwimisebenzi yawo yonqulo. Xa kungoku, iRashiya ikhuphe elokuba iincwadi zawo eziyi-80 “ziyingozi.” Oku kuthetha ukuba ukusasaza okanye ukuba nezi ncwadi, njengethi Incwadi Yam Yamabali EBhayibhile, kukwaphula umthetho. Okunye, ngoDisemba 2014, iNkundla Ephakamileyo yaseRashiya yakhupha umyalelo wokuba iwebhsayithi yethu, i-jw.org, “iyingozi.” Umntu akanakukwazi ukungena kule webhsayithi xa eseRashiya kwaye ukuthetha ngayo kujongwa njengokwaphula umthetho. Ukususela ngoMatshi 2015, abajonga izinto ezingenayo neziphumayo elizweni abakuvumeli ukungeniswa kweencwadi zamaNgqina kweli lizwe, kwaneeBhayibhile neencwadi ezahlolwa ziinkundla zaseRashiya zaza zathi azinabungozi.
Ezomthetho zisaqhubeka zisenza okufanayo nakwisixeko saseTaganrog, apho abasemagunyeni baye batyabeka abavakalisi abayi-16 ngetyala “lokwaphula umthetho” kuba belungiselela yaye besiya kwiintlanganiso. Kwisixeko saseSamara, abasemagunyeni bafumene umyalelo ovela enkundleni wokuvala umbutho wethu osemthethweni kuba kusithiwa “uyingozi.” Phezu kwazo zonke ezi zinto, abazalwana noodadewethu abaseRashiya abanikezeli kodwa bazimisele ukunikela “izinto zikaThixo kuThixo.”—Mat. 22:21.